Swiiti anwụrụ Ọkwa 437 aghụghọ na Atụmatụ - Egwuregwu swiiti anwụrụ - Free Ndụ Ndụ Atụmatụ Ndị na-egosi
Ị nọ ebe a: Ulo / Uncategorized / Swiiti anwụrụ Ọkwa 437 aghụghọ na Atụmatụ
Last updated on Julaị 19, 2021 Site na Isobella Franks Leave a Comment
Ọ na-ewute gị maka ịrapara n'otu ebe ahụ ị nọ? Ọ dị gị ka ndụ gị enweghị ihe mgbaru ọsọ ma ọ bụrụ na enwetaghị ihe mgbaru ọsọ a? Eeh, ọtụtụ ndị mmadụ na ndụ nwere otu mmetụta ma ọ bụrụ na ha arapara n’otu ọkwa n’egwuregwu. N'ihi, ịchọta obi ụtọ na-enweghị ikpochapụ ọkwa nke swiiti anwụrụ siri ike. Iji kpochapụ nchegbu a maka ndị mmadụ, anyị na-ewepụta ngwọta dị mfe site n'inye onyinye swiiti anwụrụ larịị 437 aghụghọ na Atụmatụ.
Kpamkpam, ị na-enwe nkụda mmụọ maka ịrapagidesi ike n'otu ọkwa ahụ. Nke a bụ ọkwa njikọ aka. E mesịa, mmadụ anaghị enwe obi ụtọ ruo mgbe ọkwa ahụ nwetara. Ma ị nwere ike iche n'echiche otú ọ ga-adị ya ma ọ bụrụ na ọkwa ahụ gafere? Chegodị otú obi dị ya, obi ụtọ, afọ juru, obi iru ala na ihe na-abụghị.
Ebumnuche nke ọkwa swiiti anwụrụ 437 dị mgbagwoju anya. N'ezie, ọ chọrọ ka onye ọrụ kpochapụ 30 jelii abụọ. E wezụga nke a, onye ọrụ ga-akara 60,000 na-atụ na mgbalị nke max 50 ka 60 Nkea. The problem lies with the cake wheels which cover most of the jellies. You will first need to clear those to reach to the jellies. Echegbula gị na anyị nọ ebe a inye Swiiti anwụrụ larịị 437 aghụghọ na Atụmatụ?
Swiiti anwụrụ larịị 437 aghụghọ na Atụmatụ
Site na ihe anyị nụrụ bụ na ndị mmadụ na-eche ọtụtụ ihe isi ike ihu ma na-etinye oge buru ibu n'ịgafe ọkwa a. Otú ọ dị, ha ka na-enweghị ike ikpochapụ nke a n'ihi mgbagwoju anya dị na ya. Maka nke a, anyị ewetala ụfọdụ ndụmọdụ ga-enyere aka imezu ebumnuche n'ime mmegharị ahụ ekwuputara.
Enwere 3 wiil achicha jikọtara na jelii na ọkwa a. Ọrụ mbụ gị kwesịrị ịbụ ikpochapụ wiil ndị ahụ. Ya mere, jiri ihe nchikota gi na nke ekpuchighi nke candies puru iche. Nchịkọta ndị a nwere ike ibutu wiil ahụ n'otu aka na-enyere gị aka igbochi mmegharị gị maka jelii ndị ọzọ
Ọzọkwa, kpochapụ jellies dị elu ka ị na-ezere jelii ahụ. Buru ụzọ mee ihe banyere meringues ndị jelii azụ na-ekpuchi. Ọzọkwa, ị kwesịrị ị na-eme ya na-enweghị rụọ ọrụ na jelii. Jelii a nwere ike inyere gi aka iwere ihe di na wheel achicha.
Mgbe nke a gasịrị, gbalịa ijikọta jelii ahụ na candies pụrụ iche. Nke a ga - enye aka ime ka ike dị ike iji zute nnukwu jellies na wiil achicha. Ọ bụrụ na ị nwere ike ịme bọmbụ agba ọ ga-abụ ngwa ọgụ gị kachasị mma agbanyeghị ikike ike ndị a nwere ike bụrụ ngwa ọgụ siri ike. Na ntụle, ma ọ bụrụ na nke a ada ada, ị nwere ike ịrapara na-eme ka swiiti n'ịgwa nke nkeewa akara na ọbọp candies.
Jellyfishes nwere ike ịrụ ọrụ dị ka ngwa ọgụ kachasị mma ka ọ dabara na candies ndị ọzọ nwere otu agba. Ọ ga-egwu mmiri rie jelii n'ámá. N'ihi nke a, ị ga-enweta nkụchi shuga nke ga-enye gị ọtụtụ isi.
Anyị na-atụ anya na Swiiti anwụrụ larịị 437 Atụmatụ na aghụghọ na-enyere gị aka. Ma ugbu a, ị gafere ọkwa a n'enweghị nnukwu nsogbu.